फेरि घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ – Sandesh Munch
July 3, 2020 287
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार छापावाल सुन तोलाको पाँच सय रुपैयाँले घटेको हो ।
बिहीबार प्रतितोला ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज प्रतितोला ९० हजार पाँच सयमा कारोबार भइरहेको छ ।
महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन प्रतितोला ९० हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यसैगरी चाँदी प्रतितोला ९४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला
Prevदोबाटोमा प्रधानमन्त्री : राजीनामा दिने कि अडिने ?
Nextसाम्राज्ञीलाई सोभितको प्रश्न, ‘नराम्रो प्रचार गर्ने तपाई को ?’
वैज्ञानिकले विकास गरे नयाँ प्रविधि, अब शरीरभित्र छिर्न खोज्ने को#रोना भाइ*रस नाकमै रोकिनेछ
रोल्पाका धबाङ र गुरुङगाउँ सिल
के छ त लाभ ? –यो आसनले मेरुदण्ड बलियो बनाउँछ । घ्राण शक्ति बढ्छ । –टन्सिल जस्ता समस्या ठिक गर्छ । –थाइराइड ग्रन्थीमा लाभ मिल्छ । मलद्वार सम्बन्धी समस्यामा पनि यो लाभदायक मानिन्छ ।